Budata KMSpico maka Windows
Budata KMSpico, ntinye arụmọrụ Windows nefu, mmemme mmemme Office.
Kedu ihe kpatara I kwesiri iji budata KMSpico?
Ọ na-enye mgbe ebighị ebi, na-akparaghị ókè, ebighị ndụ nke sistemụ arụmọrụ Windows na mmemme Office. Enwere m ike ịsị na ụzọ kachasị mfe ma kachasị ọsọ iji rụọ ọrụ na ikikere sistemụ arụmọrụ Microsoft Windows na mmemme Microsoft Office. Ekwadoro m ya na onye ọ bụla na-achọ mmemme mmemme Windows / Office enweghị nje
Kedu ihe bụ KMSpico?
Ngwaọrụ kachasị dịrị maka ịrụ ọrụ, ikikere, ntinye ọrụ nke sistemụ arụmọrụ Windows (10, 8.1, 8, 7, Vista) na mmemme Microsoft Office (2016, 365, 2013, 2010).
Etu esi arụ ọrụ Windows / Office na KMSpico?
Ntinye na ikike ikike nke m ga-akwado maka ndị na-eji sistemụ nrụọrụ Microsoft Windows na Office ọrụ Office nọ nelu ndepụta ahụ. KMSpico, mmemme nnabata Windows nefu, nke dị ọcha na nke iwu kwadoro, na-akwado usoro 32-Bit na 64-Bit. Nadịghị ka ọrụ KMS, ọ na-ewepụ ụbọchị 180 site na ịtọgharị counter ugboro abụọ nụbọchị. Ọ na - enye gị ohere ime ka Windows na Office rụọ ọrụ maka ndụ. Ọ dịkwa ezigbo mfe iji. Iji rụọ ọrụ Windows na Office, ihe ị ga - eme bụ; Imeghe KMSpico na ịpị bọtịnụ uhie. Ga-enweta ikikere Windows na Office software nime sekọnd.
Faịlụ RAR Paswọdu: getkmspico.com
Windows Versions I nwere ike rụọ ọrụ na KMSpico:
Windows Vista Azụmaahịa / N
Windows 7 Ọkachamara / N
Windows 8 (niile)
Windows 8.1 (niile)
Windows 10 (niile)
Verslọ Ọrụ You nwere ike Jiri KMSpico rụọ ọrụ:
Office 2010 (niile)
Office 2013 (niile)
Office 2016 (niile)
Windows Server Versions Can nwere ike rụọ ọrụ na KMSpico:
Ihe nkesa 2008 Standard / Dacacenter / Enterprise
Ihe nkesa 2008 (R2) Standard / Dacacenter / Enterprise
Ntọala 2012 Standard / Datacenter / Enterprise
Ihe nkesa 2012 (R2) Standard / Datacenter
Mbido Windows (ebighị) mmemme nbudata
Windows ebighị (ebighị)
Mmeghe Windows 7
Mbido Windows 8.1
Mmekọrịta Windows 10
Mbido Windows Vista (mmalite)
Mbido Windows 10 Office 365
Windows 10 ebighị virus free
Mmemme mmemme Windows
Mmemme mmemme Windows 7
Windows 8 ebighị mmemme
Mmemme mmemme Windows 8.1
Mmemme mmemme Windows 10
Mmemme mmemme Windows Vista
Ntinye ikike Windows
Usoro ikikere Windows
Mmekọrịta Microsoft Office
Ntinye Office 365 (mmalite)
Office 2016 English ebighị (ebighị)
Mmemme mmemme 365
Ngwaọrụ Office KMS